Covid-19 : Azo tiliana aingana amin'ny Test Rapide Antigénique
samedi, 22 janvier 2022 10:44
Betsaka ireo ahitana trangan'aretina ankehitriny, na olon-dehibe na zaza, misy ny fifangaroana amin'ny gripa sy aretina hafa, toy ny fiakaran'ny maripana, ny fivalanana.
Efa maro ihany koa ireo tsy manana tranga tsy mahere tsirokanina na tsy mahare fofona, nefa mety ho Covid.
Misy fitaovana kely azo anaovana fitiliana aingana, Test Rapide Antigénique (TRA), tsy marina 100% akory izy, ary tsy mahasolo ny PCR, na ny fakana singa dia jerena amin'ny laboratoire, fa izay ataony hoe positif kosa dia tena positif, tsy ilana PCR akory.
Toa ireny test grossesse ireny izy, efa misy ny kojakoja rehetra miaraka aminy, alainao tenany ihany ny singa anatin'ny oronao, amin'ny alalan'ny coton tige sterile efa omeny, dia ajoboka anatin'ny ranoka efa miaraka aminy, dia iny ranoka iny no apetraka amin'ilay fitaovam-pitiliana, ka raha 2 barres no mitranga eo, dia mitondra ny otrikaretina Covid-19 ianao izany, sady voa no mamindra.
Raha tsy 2 barres kosa dia tsy midika fa tsy misy, fa azo heverina tsy mamindra ao anatin'ny 24-72h.
Any ivelany dia amidy any amin'ny pharmacie izy io, misy aza no zaraina any ampianarana, dia samy manao autotest rehefa mahatsapa tsy dia salama, dia maka ny fepetra rehetra raha positif.
Eo amin'ny 2-5euro (20 000ar) eo ny vidiny ao Frantsa.
Tsara izy io raha ampidirina eny amin'ny pharmacie eto amintsika, ka rehefa tsy manam-bola hizarana azy ihany ny fanjakana, dia mba afaka mividy any amin'ny pharmacie izay manana fahefana amin'izany.
Eto amintsika moa, dia tsy andoavam-bola ny fanaovana test PCR amin'ireny toby natokana amin'izany, ny olana dia be ny milahatra, ary ela ny valiny vao tonga, na ireo marary eny amin'ny hopitaly aza, efa ho tapitra ny traitement 5j voalohany mbola tsy tonga ny valiny, nefa mety andiso ny fitsaboana ihany izany.
Ny tena loza mitatao, dia betsaka ny olona zaraina AZITHROMYCINE, isan'ny fanafody fitsaboana ny Covid-19 eto amintsika, nefa izy ireny, toy ny antibiotique rehetra, dia tsy levon'ny vatana tanteraka, ka lasa any amin'ny pipi, izay miafara any anaty rano sotrointsika hatrany (cycle de l'eau), ka dia ho lasa résistant eto amintsika ity aretina ity, satria ilay otrikaretina hiamatanjaka satria zatra io fanafody io izy.
Mbola mihanaka ity aretina ity fa aoka tsy ho variana isika. Mbola mamono olona maro, 50 tsy latsaka isan-kerinandro no voamarina, ireo maty any an-trano na tsy hitan'ny antontanisa mbola amboniny.
Ny zavatra hita aloha hatreto dia filaharam-be hatrany ny eny anivon'ny BMH, sy ny toerana fanaovana fanambaràna fahafatesana.
Mirary soa ho an'izay mbola mitsabo tena ankehitriny.